DAAWO [VIDEO/SAWIR]: DUGSIYADA BARBAARINTA CARUURTA OO DAWLADDA SOMALILAND FURTAY, TODDOBA DUGSI OO TIJAABO AHAAN LOO DOORTAY – Somali Schools
17th October 2016 at 8:58 am
DAAWO [VIDEO/SAWIR]: DUGSIYADA BARBAARINTA CARUURTA OO DAWLADDA SOMALILAND FURTAY, TODDOBA DUGSI OO TIJAABO AHAAN LOO DOORTAY
Wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa markii u horaysay dalka ka hirgelisay barnaamij ku cusub waxbarashadda dalka, kaasi oo ah qaybta bar-baarinta caruurta ee dugsiyadda dawliga ah.
Barnaamijkaasi oo si tijaabo ah looga bilaabay todoba dugsi oo dawli ah oo ku yaala Caasimadda Hargeysa, waxaana barnaamijkaasi hirgelintiisa iska kaashanaya wasaaradda waxbarashadda, Hay’adda Pharo Foundation iyo Ururka Wadaniga ah ee HYDA.
Xaflad lagu daahfurayay barnaamijkan cusub ee ay wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare ku soo kordhisay dalka oo maanta lagu qabtay xarunta dugsiga Maxamed Aw Cali Dayib ee magaaladda Hargaysa, waxaana xafladaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashadda C/laahi Dheere, masuuliyiin ka socday hay’adda Pharo Foundation, maamulka iyo macalimiinta dugsiga Maxamed Aw Cali Dayib.
Wasiirka wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare ee Somaliland C/laahi Ibraahim Habane (C/laahi-dheere), oo furitaanka mashruucani hadal ka jeediyay ayaa ka waramay barnaamijkani iyo tiradda dugsiyadda ee la doonayo in laga hirgeliyo.
Waxaanu yidhi “Farxad weyn ayay noo tahay wasaarad ahaan in aan ka soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo barnaamijkan mudadda dheer laga soo shaqaynayay, oo ka hirgeli doona todoba dusgi oo uu ka mid yahay dugsigan Maxamed Aw Cali Dayib. Barnaamijkani waa tijaabo, barnaamijkani markii u horaysay ayaa hay’adan maxaliga ah ee HAYDA ay ii keeneen maalmihii aan wasaaradda ku cusbaa aad ayaan u soo dhaweeyay, waanan fahmay baahidda loo qabo”.
C/laahi Ibraahim Habane (C/laahi-dheere), waxa kale oo uu ka hadlay u jeedadda laga leeyahay barnaamijkani “U jeedadeenu waxaa weeyi in dugsiyadda dawliga ahi ay helaan arday yar yar oo loo diyaariyo in ay hadhaw galaan, fasalka koowaad in la hello, oo inta ka horaysana loo tababaro far-barashadda, oo Qur’aankii la sii barro, oo akhlaaqiyaadkii la sii barro, oo qiimaha nolosha iyo sheekooyinka la xidhiidha nolosha iyo waayaha oo lagu saleeyay sida ay wax u fahmayaan caruurtu, in la barro weyi u jeedadu” ayuu yidhi wasiirku.
Ugu danbayn wasiirku waxa uu kula dar-daarmay maamulka iyo macalimiinta dugsiga dugsiga Maxamed Aw Cali Dayib, in looga baahan yahay in ay caruurta yar yar ku tarbiyadeeyaan akhlaaqda wanaagsan, isla markaana u tababaraan sidii ay iyagoo dhisan tahay waxbarashadoodu u geli lahaayeen fasalka koowaad.
Wasiirka oo arrimahaasi ka ahdlayay-na waxa uu yidhi “Waxaa la idiinka baahan yahay haddii aad tihiin maamulka dugsiga iyo ardaydan yar yar-ba, caruurtaasi yar yar in aad akhlaaq fiican bartaan iyo waxbarasho fiican in aad tustaan, oo halkii waalidkood u gashaan inta ay idinla joogaan”.
Geesta kale waxaa munaasibadaasi ka hadlay Maxamed Faarax, oo ka socday hay’adda phara Foundation oo mashruucani hirgelinaysa waxaanu sheegay in mashruucani uu yahay mid dawli ah, isla markaana uu hoos imanayo wasaaradda waxbarashadda.
“Mashruucani ma aha mid cid gaar ah ay leedahay, waanu ka duwan yahay sidaasi oo mashruuc xukuumi ah, sida ay dusgiyadda hoose dhexe iyo sare ee dawladu ay u yihiin xukuumi ayaa barnaamijkanina u hoos imanayaa dawladda”ayuu yidhi masuulkaasi u hadlayay hay’adda Phara Foundation. Maxamed yusuf, oo faahfaahin ka bixinayay waxyaabaha uu barnaamijkan bar-baarinta caruurta kaga duwan yahay kuwa gaarka loo leeyahay ee hore dalka uga jiray, waxa uu yidhi “Barnaamijkan waxaa aasaastay qayb u gaar ah oo ka tirsan wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare, qaybtaasi oo xil saaran ilaalinta, daryeelka iyo ka warhaynta manhajka waxbarasho ee caruurta la barayo”.
Sidoo kale waxaa isna halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha Ururka wadaniga ah ee HAYDA Khaalid X. Aaden Cabdi , waxaanu tilmaamay in barnaamijkani uu noqon doono mid lagu sii fidiyo dugsiyadda kale ee dawliga ah, haddii lagu guulaysto qaybta hore ee barnaajimkani.
Khaalid X. Aaden Cabdi, ayaa sidoo kale waxa uu mahad naq u jeediyay maamulka iyo macalimiinta dugsiga Maxamed Aw Cali Dayib, sida wanaagsan ee ay munaasibadaasi u soo qaban-qaabiyeen.
isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Waxaanu u mahad naqaynaa marka koowaad maamulka dugsiga Maxamed Aw Cali Dayib, oo sidii aanu barnaamijkani u qorshaynay si ka sii qurux badan u soo diyaariyay. Waxay tallaabadani ina tusaysaa qiimaha ay leedahay in dugsiyadda dawliga ahi ay helaan qaybta bar-baarinta caruurta (KG), iyo sida ay muhiimka ugu tahay. Waanan soo dhawaynaynaa”.